Gbasara Anyị - Topshine Auto Parts (NanChang) Co., Ltd.
Topshine akpaaka akụkụ factory bụ otu n'ime ndị kasị ọkachamara na-emepụta nke akpakanamde roba na nkwusioru akụkụ na China, nke e guzobere 2006. Topshine nwere ihe karịrị 50 elu mmepụta ngwá na ule akụrụngwa igwe. Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke akpaaka roba akụkụ (Ngwunye Injin,Strut Mounts / Shock absorber Mounts, Center agba,Air sooks / Rubber sooks,Na-arụ ọrụ) na akpaaka nkwusioru akụkụ (Ogwe aka,Ball nkwonkwo,Jide Rod End,Ọgwụgwụ Ọgwụgwụ,Cross Rod / Njikọ Center,Njikọ stabilizer,Idler Arm,Pitman Ogwe aka). Yabụ ị nwere ike ịchọta akụkụ dị elu dị elu ịchọrọ na ọnụahịa kachasị asọmpi. Mgbe ịzụrụ akpaaka akụkụ online www.topshineparts.com can nwere ike zuru ike na ị ga-enweta elu mma N'ogbe price nke akpaaka akụkụ, na akụkụ niile anyị na-ere nwere a zuru akwụkwọ ikike. Anyị na-aghọtakwa otú ọ dị mkpa iji nweta akụkụ ziri ezi mgbe ịzụrụ akụkụ akpaaka na ntanetị. Ọ bụ ya mere ihe niile anyị ji nwee nkwa iji dabara nke ọma nke anyị na-ekwe nkwa.
Topshine na-agba ọsọ site TS16949 management system. Anyị na ngwaahịa nwere ike-emepụta dị ka ndị ahịa chọrọ na-enye zuru okè mgbe-sales ọrụ. Ngwaahịa na-exported na United States, Europe, na Middle East, Australia, Japan, Latin America na ihe karịrị mba 30 na mpaghara. Anyị na-ere ụdị niile nke akụkụ akpaaka, gụnyere Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, Ford, Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, Audi, Chevrolet, Land Rover, wdg. Ngwaahịa anyị na-enye OEM na ahịa ọzọ n'ụlọ na mba ọzọ, na nweta ude na ude mba ofesi. Topshine bụ gị pụrụ ịdabere na soplaya. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ozi ịchọrọ, biko kpọọ anyị na 18070095538 Shirley ma ọ bụ zitere anyị emailsales@topshineparts.com Obi dị anyị ụtọ inyere gị aka ịchọta akụkụ ndị ịchọrọ ma ka anyị bido ijere gị ozi.
Ndị ahịa anyị na ndị mmekọ
Anyị ji oke egwu banyere usoro ọ bụla, nke bụ echiche anyị nke Topshine na-akwado. Anyị nwere àgwà mmesi obi ike site na mmepụta nke akụrụngwa rụchara ngwaahịa. Ngwa na mmepụta nke usoro ọ bụla, yana nkwakọ ngwaahịa, akara, mbukota, pallets na ụlọ nkwakọba ihe nke ngwaahịa, n'ikpeazụ ngwongwo ahụ rutere n'aka gị. Anyị na-agbaso usoro ahụ dum ma nye ndị ahịa akụkọ, foto na vidiyo dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Anyị akwụkwọ ikike na-ekpuchi ngwaahịa Ẹnam ekese si anyị maka oge nke 2 afọ. Anyị na ngwaahịa nwere ike-emepụta dị ka ndị ahịa chọrọ na-enye zuru okè mgbe-sales ọrụ.
• Nkwa / Akwụkwọ ikike
• Nkwakọ ngwaahịa
• Njirimara Ngwaahịa
• Ọrụ Ngwaahịa
• Mbupụ ozugbo
• Ogo mma
• Obere iwu anara